“အတွေးစလေးတွေ”: လူလျှောက်ကန် . . .
Posted by Han Kyi at 7:37:00 am
"မနေ့ကပဲ ရှေ့ကမောင်မင်းကြီးသားတစ်ယောက်က ဆစ်ဂနယ် ဘယ်ပြပြီး ညာဘက်ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ကွေ့ချသွားတာ ဘောလုံးသမားများ ဘယ်ဘက်ကိုအယောင်ပြပြီး ညာဘက်ကို ဆွဲသွားတာနဲ့တောင် တူသေးတော့..."
ဦးဟန်ကြည်ကြီးရဲ့ကွန့် မန့် ကို ဖတ်ရကတည်းက ထင်တော့ထင်သား..ခု ပို့ စ်ကို ဖတ်ရတော့မှ ...ကွက်ကွက်ကင်းကင်း မြင်အောင် ရေးတတ်ပါပေတယ်...
ဒီပလေယာတွေသာ စုလိုက်ရလို့ကတော့.. :D
ရှုံးတာ နိုင်တာထက် ပျော်စရာကောင်းလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း ဆရာရေ ..
ပွဲတစ်ပွဲလောက်စီစဉ်ပါလား။ ပြီးတော့ ဆရာ့ ဘလောဂ့်ကနေ Live ပြ ပေး :D ပျော်စရာကြီးရယ်
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး ဘောလုံးကန်ဖို့တော့ မချိန်းကြပါနဲ့ ဘလော့ဂါ၊ ဘလော့ဂီတို့ရယ်...ဦးဟန်ကြည်ခမျာ ၀မရှိလို့ ၀ိမလုပ်ရဲရှာပါဘူးတဲ့...ဇမရှိလို့လည်း ဇိမပြုတ်ပါကြောင်းဗျား...း)))
အိပ်ခါနီး ဖတ်မိလို့ မျက်စိ အတော်လေး ကျယ်သွားတယ်။ တစ်ယောက်ထဲ တခွီးခွီးနဲ့။ တစ်ယောက်ယောက်ကများ လှမ်းမြင်သွားရင် သူကြီးမင်း ယဉ်ယဉ်လေး ရူးနေပြီ ထင်နေမှာ သေချာတယ်။
ဆရာဟန်ကြည်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေထဲက အမှတ်တွေ ရေတွက်ကြည့်နေမိတယ်။ ဆရာဟန်ကြည်တို့က စုစုပေါင်း တစ်မှတ်ကြီးများတောင်။း))
ဒါတောင်မှ ဟိုဘက်က မိန်းမရင့်မာကြီးတွေက ဒီဘက်က ယောက်ျားနုနုနယ်နယ်လေးမို့ တစ်မှတ်ပေးသွားတာ ဆိုပါလား။
သူကြီးမင်းလဲ ကလေးတုန်းကတော့ ဘောလုံး အတော်ကန်သား။ ဒါပေမဲ့ ကစားဖော်ကန်လိုက်တဲ့ ဘောလုံး ရင်ဆို့တည့်တည့်ထိပြီး အင့် အင့် အင့် နဲ့ မြေကြီးပေါ် လှဲကျပြီးကထဲက အခုထက်ထိ မကန်တော့သလောက်ပါဘဲ။
သူကြီးမင်း ကိုယ်ကာယလေးကလဲ ပိစိလေးရယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀ါသနာထုံတာက ဘောလုံးနှင့် လက်ဝှေ့။ ကိုယ်တိုင်တော့ မကစားရဲပါဘူးဗျာ။ ကြည့်ချင်တာ ကြည့်ချင်တာ။
ရွာဦးကျောင်းနဘေး ဖြတ်သွားရင်တောင် ကိုရင်ကျောင်းသားတွေ သင်္ကန်းစုပ်ကလေး လုံးကျစ်ပြီး ဘောလုံးခိုးကန်တာကစ ထိုင်ကြည့်တတ်တဲ့ သူကြီးမင်းပါ။။
နိုင်ငံတဲ့ အသင်းကို အားပေးရင်း မန်ယူအသဲစွဲ ဖြစ်သွားပါရောလား။ မန်ယူပွဲဆို အင်တာနက်ကနေ မရရတောင် ကြည့်ဖြစ်တယ်။
တောက်.. ဒီနေ့မှ stoke နဲ့ ၁-၁ သရေကျသွားတယ်။ အနိုင်ကန်တာ မဟုတ်ဘူး။ အောက်ကကောင်တွေ မြှောက်ကြွမြောက်ကြွ ဖြစ်ကုန်ဦးမယ်။ အထူးသဖြင့် ချက်ကြီးပေါ့။ မေတ်တာကို နဲနဲလေးမှ မရှိတာ။ ပြောရင်း ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီမသိ ဟာဟ။
ဒါနဲ့..စကားမစပ်။ ဆရာဟန်ကြည့် အသင်းမှာ ကျော်စွာအောင်က နှစ်ယောက်ရှိတာလား မသိ။
ဆရာရေ အနော်တို့လည်းဘောလုံကို မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့
ဟိုးအရင် မြန်မာနဲ့ထိုင်း ပွဲတီဗိကလာတော့ ..
အဲ့ဒီနေ့က အနော်အမေကြီး ဈာပနချရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်
ရှေ့ပဲပြေးကုန်ကျတော့ အမေကြီး ဈပန ကို
တောက်.. ဆရာဦးဟန်ကြည်တို့အသင်း ဖလားပွဲ မကစားလိုက်ရတာ နာတယ်..ပြိုင်ဖက်မရှိ ချန်ပီယံဖြစ်မဲ့အသင်းတသင်း တိမ်မြုပ်သွားရတာပေါ့နော..မြန်မာ့ဘောလုံးလောကကြီး နစ်နာသွားရတာ ဒါ့ကြောင့်ကိုး...း)))
ကစားနည်း တွေ မှာတော့ ဘောလုံး ကစားနည်း လောက် ရင်ခုန်တာမရှိ
(အလုံးလေး မလားလို့တော့ မသိ)
ဆရာ့ အသင်းလေး ကို အားပေးသွားပါတယ် ရေသန့် ဗူးနဲ့ပါ
ဟုတ်ပ...သူကြီးပြောမှ ပြန်ကြည့်မိတယ်...ရှိစုမယ့်စုလူလေးတွေ ရေကြည့်ရင်း ကျော်စွာအောင်ကို နှစ်ခါပြန်ရေမိသွားတယ်....း))) လူများတယ် ထင်ရတာပေါ့...ဟား ဟား
ဆရာရေ စိုင်းခွန်မျိုးနောင်ရဲ့ ခြေသလုံးက ဂစ်တာကြိုးလောက်ရှိတယ်ပေါ့။ ဒါဆို အကြီးကြီးနေမှာနော်။ ကိုမင်းလို သူငယ်ချင်းမျိုးလိုချင်တယ်။ ရှာပေးဦးလေ။ ဟီး။
အတော်လေးကို ကောင်းတဲ့အသင်းပဲ အရမ်းရယ်ရတယ်ဗျာ။
ဆရာ တို့သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်စုပြီး
မြန်မာ ဘေားလုံး အသင်း ကို နည်ပြသင့်တယ် ဆရာ
အဲဒါ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖာဂီ ကြီးတောင်
ဆရာဟန်ငယ်ဘဝရဲ့ ဘောလုံးအကြောင်းဖတ်တော့ ဒေါ်ချောတို့လည်း ဘောလုံးကန်ခဲ့တာ သတိရပါ့ရဲ့ရှင်။ ကျွန်မကလည်း ဘောလုံးပွဲ သိပ်ကြိုက်တာ ။ ကိုယ်တိုင်တောင် ဝင်ကန်ခဲ့တာ။ နောက်တာမထင်နဲ့ တကယ်ကန်ခဲ့တာနော်။း) ကညာပျိုနဲ့ ဇရာအို ဆိုပြီး ကန်တာ ။ ပွဲပြီးသည်ထိ ဘောလုံးကို တစ်ချက်မှ ထိအောင် မကန်နိုင်ဘဲ လူလိုက်ဆွဲနေတာနဲ့ ပြီးသွားတာ ပြန်သတိရတယ်။ ဟိဟိ
လူလျှောက်ကန်တဲ့လူတွေ ..စိတ်နာတယ် ကလေးဘ၀က ကွင်းဘေးထိုင်ကြည့်နေတာ .
အဲလိုကန်ကြလို့ မျက်နှာကိုလာမှန်ပြီး လူတောင်မြောင်းထဲပြုတ်ကျတယ်
စိတ်နာတယ် စိတ်နာတယ် လူလျှောက်ကန်ကြီးတွေး)
ဆရာဟန် တို့ အသင်းက တော့သူခေတ်နဲ့ သူနာမည် ကြီးပဲ ဖြစ်ရမယ်။ :)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဓါတ်ပုံထဲမှာ ရွှေဖလားလေးနဲ့
ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင် ငါတို့အသင်းကွ ဆောင်ပုဒ်လေးကြိုက်တယ်။
ဟားဟား။ ဘောလုံးခရေဇီပေါ့။ ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး တော်တော်လေးကို ရယ်မောပျော်ရွှင်သွားတယ်ရှင်။
မောင်ဘကြိုင်လည်းဘောဝါသနာရှင်တစ်ဦးပါ ကိုယ်တိုင်လည်းကန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ခုများတော့ သက်လုံသိပ်ကောင်းဖူးရယ်
27 September 2011 at 02:04
ဝါသနာကတော့ အတော် တူတာပဲဗျို့။
ကျနော်ကတော့ ကြည့်လည်း ကြည့်တယ် ၊ ကန်လည်း ကန်ပါတယ်။ အခု ဒီမှာတောင်မှ အလုပ်က ညဆိုင်းမို့လို့။ ဒါတောင်မှ သွားကန်ကန်ဖြစ်နေသေး။ အမေကတော့ ပြောတယ် " ငါ့သားက ကလေးကန် ခွေးကန် အကုန်ကြည့်တာပဲကိုး " တဲ့။ တကယ်လည်း ကျနော်က ကန်စရာ မရှိရင် ခွေးနဲ့ပါ ဘောလုံး လုကန်တတ်တဲ့ ကောင်ဗျ။
တစ်ခေါက်ရေးတင်လိုက်တာဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတာနဲ့ နောက်တစ်ခေါက်လာရေးတာပါ။ ကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့ W လို့ခေါ်တဲ့လမ်းပေါ်ကန်ရတဲ့ကော်ဘောလုံးခေတ်။ ကျွန်တော်လည်းကိုဟန်ကြည်လိုဝါသနာပါပေမယ့်မကန်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့မန်ယူပရိသတ်လား။ ကျွန်တော်ကအာဆင်နယ်ပရိသတ်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးဖော်တစ်ယောက်ဘောလုံးဝါသနာပါလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ဟာသဥာဏ်လည်းတော်တော်ရွှင်ပုံရတယ်။
ရှေ့တန်းမှာ သက်သာချက်ကတော့ တစ်ဖက်နောက်တန်းသမားနဲ့ ကျားထိုင်ထိုးနေလို့ရတယ် ဆိုတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော်တော်ရယ်မိသေးတယ်။ ရေး အားကောင်းပုံရတယ်။ အားပေးပါတယ်။
ကိုဆူးသစ်ရေးလိုက်တဲ့ ကွန်မန့်ကို စပမ်းထဲမှာ ရှာတာလည်း မတွေ့တော့ပါ...တစ်ခုခု မှားသွားလို့ ပျောက်သွားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်...လင်ခ့်ချိတ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ...
ီစီဘောက်ပျောက်နေလို့ လာအော်သွားတယ်နံမည်ဗျိူးးး ဆရာဦးဟန်ကြည် နံမည်း)
အရေးအသား ပြောင်မြောက်လွန်းလို့ ဖတ်ရင်းနဲ့ ရီလိုက်ရတာ။ ဒီလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ငယ်ဘဝ ပို့စ်လေးတွေလည်း သဘောကျတယ်။